अर्थ/विकास Archives - Page7of 85 - Dna Nepal
रसुवामा भन्सार कार्यालय भवन निर्माणले गति लिन सकेन २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०५:५०
रसुवा, फागुन २९ । रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय भवनको निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाईएकोमा दुई बर्ष बितीसक्दा समेत पहिलो तल्लासमेत ढलान भएको छैन । कामदारको अभाव, सामग्री समयमा आउन नसक्नु..
नेपाल–भारत सीमाको ३७ नाकामा पनि चेकजाँच गर्ने निर्णय २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:०२
काठमाडौं, फागुन २२ । कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन नेपाल–भारत ३७ सीमा नाकामा पनि चेकजाँच गरिने भएको छ । उपप्राधन तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विमानस्थलमा..
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिने
काठमाडौं, फागुन २२ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वव्यापी उत्पन्न संकट र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव बारे सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा एक उच्चस्तरीय टिमले..
पूर्वाधार विकास कर वृद्धिले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यमा फरक पर्दैन : अर्थ मन्त्रालय १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:२३
काठमाडौं, फागुन १६ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कर वृद्धिले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यमा फरक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वाधार विकास करमा गरिएको वृद्धिले नेपाल आयल निगमको स्वचालित मूल्य..
काठमाडौं, फागुन १६ । ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) सञ्चालनमा आएसँगै दुई लाख ४० हजार भन्दा बढी ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ । झण्डै आठ लाख छाप्नुपर्नेमध्य अहिलेसम्म उक्त चालक अनुमतिपत्र छापिइसकेको यातायात व्यवस्था..
काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा आवश्यक काठ अझै आएन
काठमाडौं, फागुन १६ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा अपुग भएको काठ ल्याउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । अन्तरिक समस्याका कारण अहिलेसम्म ल्याउन नसकिएको र यसै महिनाको अन्तिमसम्ममा ल्याइसक्ने काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिले जनाएको छ । समितिका..
पुस्तकको कर हट्दैन, बहस गर्न तयार छु : अर्थमन्त्री खतिवडा १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:३७
काठमाडौं, फागुन १५ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुस्तक आयातमा लागेको कर तत्काल नहट्ने बताएका छन् । सरकारले विदेशी पुस्तक आयात गर्दा अंकित मुल्यको १० प्रतिशत कर लिन थालेको छ । यसको विरोध गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला सरकारका..
अब पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर
काठमाडौं, फागुन १५ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब पेट्रोल,..
विद्युतीय बस खरीद तयारी
काठमाडौं, फागुन १५ । विद्युतीय बस कुन माध्यमबाट खरिद गर्ने, बसको क्षमता, त्यसको आकारलगायतका विषयमा छलफल अघि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्यको नेतृत्वमा बनेको समितिले बसका बारेमा आवश्यक तयारी अघि बढाएको हो..
रसुवा भन्सार कार्यालयमा राजश्व असुली शून्यस् चीनसँगको आयात–निर्यात ठप्प १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १०:१२
रसुवा, फागुन १४ । रसुवा भन्सार कार्यालयमा राजस्व असुली शून्यमा आएको छ । चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेसँगै रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङमा सामान लिन जाने कन्टेनरहरुहरुको आवत जावत बन्द भएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयमा राजस्व असुली शून्यमा..